Iowa keessasti guyyaa tokko namni covid-19 qabame 1,400 dha, nama 90 Woodbury County keessa dabalate | KWIT
By Fatiya Adam • Oct 12, 2020
Sababa Covid-19 namni 3 dabalataan Woodbury County keessati du’uu gabaasan. Manni fayyaa Sioux land akka gabaaseti namootin duan kunis nama umrii 61-80 jidduu jiranii fi nama umriin deemedha. Woodbury County keessati hanga dhukkubni kun jalqabe irraa namni waliigalatti due 81 gaheera.
Akka gabaasa deparmantii mana fayyaa Iowa tti namni waliigalatti Corona virus Iowa keessati qabame 100,000 ol taree jira. harki qixxee ol fayyee jiras. Guyyaa har’aamo namni haarawa qabame 400 yoo tau waliigalatti namni duemmoo 1,472 gaheera.
By Fatiya Adam • Oct 9, 2020
Manni fayyaa Sioux land akka gabaasetti sababa Covid-19 namni lama Woodbury County keessati akka due gabaasan waliigalatti namni due 78.
Guyyaa har’a namni 14 dabalataan Iowa keessati kan due yoo tau namni 1,200 kan haarawa qabameedha.
Lakkoofsa nama Kan hospitala Iowa keessa jiranis guyyaa har’aa ol guddatee jira. Akka state guututi dhukubsattoota Covid-19 461 jira, nama 72 Woodbury jiru dabalatee. Kunis sadarkaa kale gabaafame dabalateeti.
Aanan mana barumsa Sioux City namni Covid-19 kan qabame akka xiqqaata jiru gabaasa bira himan.